SARY AVY AMIN'NY ALIKA CHIHUAHUA, 6 - ALIKA
Sary avy amin'ny alika Chihuahua, 6
'Bear dia mainty hoditra mainty miaraka amin'ny tan Chihuahua ary 10 herinandro eo ho eo izy. Alika kely tony tokoa izy… indraindray. Ary matetika tsy dia mitabataba. Mifankahazo amin'ny saka malalako izy, na dia tsy liana aminy aza izy ireo. Alika mahafinaritra izy. Tena mamy sy be fitiavana izy. Saingy mazàna izy misintona sy mitsako izay hitany rehetra. Eo am-panaovana ny fanazarana ny vilany izy izao. Chihuahuas dia alika mahatsiravina. Ary tiako ny ahy !! '
'Ity malalako ity dia i Onyx, lehilahy Chihuahua mainty hoditra 12 herinandro. Vorona tia kely izy. Izy dia nateran'ny ray aman-drenintsika Jack Chi ary fifandraisana tena mahafatifaty io. Tsy toy ny ankamaroan'ny Chihuahuas Onyx's fiofanana vilany mandeha amin'ny taha tsara be. Onyx, toy ny alika kely rehetra dia tena matanjaka tia mikorisa, fitsakoana SY mitsambikina amin'ny zavatra rehetra anisan'izany ny ravina sy ny dadany. Nandeha tsara i Onyx mifanerasera miaraka amin'ny alika hafa ao amin'ny zaridaina alika raha mbola eo akaiky ny dadany. Onyx no alika alehan'ny olona rehetra 'oh jereo io alika kely io dia a Dachshund 'noho ny lokony, fa Chihuahua izy no madio ary mahafatifaty amin'izany.'
Lady Gaga ilay Chihuahua izay fotsy sy fotsy amin'ny 1 1/2 taona— 'Lady Gaga dia iray amin'ny alika kely 5 avy amin'ny dadan'ny dadanay farany fako an'i Chihuahuas . Nomena sakafo i Lady Gaga sy alika kely hafa Adele izay nalaiko tamin'ny fako sakafo alika avo lenta sy lafo vidy . Ny alika kely 3 hafa avy amin'ny fako dia nomena sakafo alika tsy lafo vidy. Ny Lady Gaga sy Adele dia nijanona tamin'ny 5 pounds ary ny alika 3 hafa avy amin'ny fako dia mihoatra ny 12 pounds. Lady Gaga no tiako. Izy no Chihuahua hafahafa. Mibolisatra izy, mazava ho azy, toy ny Chihuahua hafa rehetra, fa raha vao miompy azy ianao dia tia anao mandritra ny fiainana. Noraisiny ny kilalaony ary nanozongozona ny vodiny tamim-pientanam-po izy te hilalao nanomboka teo. Mahafinaritra azy ny miaraka amin'ny zazakely sy zazakely. Izy no sakaizako ary manafana ny fandriako. '
Lady Gaga the Chihuahua amin'ny 1 1/2 taona teo amin'ny fandriany alika
Mabel, alika kely Chihuahua miloko manga amin'ny 9 herinandro
miteraka alika misy lela mainty mainty
'Ity dia Chloe Chanel, vehivavy Chihuahua izay lava volo. Amin'ity sary ity dia nanao fanatanjahan-tena i Chloe tamin'ny akanjo marobe, nilalao teny ivelan'ny trano. 14 herinandro izy, 1 pounds, 14 auns. Tena manana ny mampiavaka azy manokana i Chloe. Izy dia tsy mitovy amin'ny alika hafa izay efa hitako. Tsy misy teny iray mamaritra ny toetran'i Chloe. Indraindray mitebiteby na avo lenta, ny sasany milamina ary tsy miraharaha. Tiany ny mihetsika .... Tena be fitiavana izy, tia manoroka. Izy dia mety ho be bibidia sy tia milalao… nefa mamy sy be fitiavana. Mihevitra izy fa lehibe lavitra noho izy. Na oviana na oviana ny olon-tsy fantatra dia tonga ao an-tranonay dia azo antoka fa hampitandrina azy ireo amin'ny famoahana ireo hazalambo mafy indrindra azony atao. Tiany ny manenjika ny reniny sy ny dadany ary milalao kilalao maro. Tian'i Chloe ny hanao veloma sy handry eo am-pofoanan'i Neny sy i Dada ary koa hitsako ireo mpanasongadin-drainy .... Tsy tiany ny vahiny, ny hafanana ary ny mpikapa-tongony. Ny fahazaran-dratsin'i Chloe dia mihazakazaka avy any amin'ny reniny sy ny dadany haingana araka izay vitany ... ary rehefa sendra lozam-pifamoivoizana ao an-trano izy .... Ny fahazarany tsara dia ny alika be fitiavana sy mahafinaritra ary mahafinaritra indrindra eto an-tany! '
Moose the Chihuahua amin'ny faha-2 taonany— '4 pounds izy ary feno angovo. Na izany aza, mazàna matory matetika izy. '
Moose the Chihuahua amin'ny 2 ½ taona, milanja 4 pounds
Chihuahuas— 'Molly (ankavanana) sy ny zandriny lahy' Tucker. Amin'ny kilao 6, hitanao ny halehiben'ny halehibeny (noho) an'i Tucker fony izy vaovao. Izy izao no lehibe kokoa. '
alika husky afangaro amin'ny pitbull
'Molly ao amin'ny Bangor, Maine' Paws on Parade 'fanangonana vola ho an'ny Bangor Humane Society. Nandrombaka ny medaly ho an'ny DOG SMALLEST. '
Chico ilay Chihuahua milanja 6 kilao, mipetraka miaraka amin'ny roa Pit Bull Terriers (Nala sy Petey). Hoy ny tompony: 'Samy matahotra azy daholo ny Pit-Bulls antsika rehefa mampiseho ny fahatezerany izy. Izy no mifehy ny akoho! Mihinana aloha izy avy eo avelany hihinana ny Pit Bulls. Mampihomehy ny mijery azy. '
Daisy the Chihuahua amin'ny faha-2 taonany
Voanjo ilay zazavavy 12-herinandro, iray kilao, kaopy dite Chihuahua— jereo ny fomba nahazoan'ny Peanut ny anarany .
Lilly, alika Chihuahua amin'ny 10 herinandro
Rufus the tan Chihuahua amin'ny 1 taona
Pepino ilay Chihuahua lava volo mainty tsy fahita firy
alika manana loha volontsôkôlà sy vatana tomady
karazana alika labrador isan-karazany
alika ratsy indrindra amin'ny manaikitra